Arofan: fiarovana ny fananan-tany | NewsMada
Arofan: fiarovana ny fananan-tany
Nampahafantarina, omaly, ny tetikasa Aro amin’ny Fananan-tany (Arofan), tanterahin’ny fikambanana Fiarahana ho an’ny fiarovana ny zon’ny tsirairay* na Miralanja, tohanan’ny masoivohon’i Alemaina eto Madagasikara. Tetikasa miompana amin’ny fanohanana, torolalana ho an’ny Malagasy amin’ny lafiny fananan-tany, hanamorana ny fanoratana sy ny fitompoana ny tany. Tanjona ny hampihenana ny aditany, hampahafantarana sy hiarovana ny zo sy ny andraikitra amin’ny fananan-tany.
Misy torolalana omena ny olom-pirenena, ny fanentanana ny vahoaka hanoratra ny taniny ara-dalàna. Eo koa ny ady amin’ny kolikoly, ka hanamafisana ny fanentanana sy ny fanabeazana ary ny serasera amin’ny fananan-tany.
Hanatanterahana ireo, hidina ifotony ny tompon’andraikitry ny tetikasa Arofan, indrindra ny any amin’ny kaominina, hitety ny fokontany. Miisa 30 ny kaominina voakasika, ka anisan’izany ny eto Antananarivo sy ny distrikan’Avaradrano. Hamoaka bokikely koa izy ireo hampahafantatra ny tontolon’ny fananan-tany, mba hampazava sy ho mora raisin’ny daholobe. Hampahafantarina sy hakana torohevitra any amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ny votoatiny mialoha ny tena hamoahana sy hanapariahana azy. Miara-miasa amin’ny rafi-panjakana voakasiky ny fananan-tany ity tetikasa ity, hanamora ny lafiny teknika sy ny lalàna, sady saika mpahay lalàna ny ankamaroan’ny tompon’andraikitry ny Arofan.
*Fiarahana ho an’ny fiarovana ny zon’ny tsirairay: Alliance pour la protection des droits de la personne.